Nepal Samaya | सेन्ट्रल जोन भलिबलमा महिलातर्फको उपाधि नेपाललाई
शुक्रबार, जेठ १३, २०७९
सेन्ट्रल जोन भलिबलमा महिलातर्फको उपाधि नेपाललाई
नेपाल समय | काठमाडौं, मंगलबार, पुष १३, २०७८
मंगलबार, पुष १३, २०७८, काठमाडौं
सेन्ट्रल जोन भलिबलमा महिलातर्फको उपाधि जितेपछि खुसी मनाउँदै खेलाडीहरु।
काठमाडौं– सेन्ट्रल जोन महिला तथा पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कप खेल्न पुस ५ गते बंगलादेश गएको नेपाली टिमको दुई लक्ष्य थियो। महिला टिमको उपाधि रक्षा गर्ने लक्ष्य थियो भने पुरुष टिमले पनि गुमेको शाख फर्काउँदै एक पदक जित्ने लक्ष्य राखेको थियो।
दुई वर्षअघि घरेलु मैदानमै भएको प्रतियोगितामा नेपाली पुरुष टिम समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो। त्यही वर्ष बंगलादेशमा आयोजना भएको महिलातर्फको प्रतियोगितामा भने नेपालले स्वर्ण पदक जितेको थियो।
त्यसै मेसोमा नेपालले महिलातर्फ सोचेझैैँ उपलब्धि हासिल गरेको छ। बंगलादेशमा मंगलबार सम्पन्न फाइनल खेलमा नेपालले उज्ज्वेकिस्तानलाई ३–२ सेटमा हराउँदै उपाधि रक्षा गर्यो। र, नेपालले लगातर दुई पटक स्वर्ण पदक जित्यो।
बंगलादेशको सहिद सरवर्दी रंगशालामा भएको खेलमा नेपालले पहिलो खेलमा दुई सुरुआति दुई सेट गुमाएर श्रीलंकालाई ३–२ ले हराएको थियो। त्यो खेलपछि नेपाली टिमका प्रशिक्षक जगदिश भट्टले नेपालको टिमले आफ्नो क्षमता अनुसारको खेल देखाउन नसकेको बताएका छन्। तर त्यसपछि नेपालले लगातार आफ्नो क्षमताअनुसारको खेल्यो र जित निकाल्यो। बंगलादेश, माल्दिभ्स, उज्ज्वेकिस्तान र कीर्गिस्तानलाई समान ३–० सेटमा हरायो।
सोमबार दिउँसो नेपालले कीर्गिस्तानलाई हराएपछि ऊ अपराजित रहँदै फाइनल पुग्यो। फाइनलको पहिलो सेटमा ७–१३ ले पछि परेको अवस्थामा नेपालले कमब्याक गर्दै १८–१८ को बराबरी गरेको थियो। त्यसपछि अग्रता बनाएको नेपालले २२–२२ र २३–२३ मा बराबरी गर्दै नेपालले २६–२४ ले जित निकाल्यो।
दोस्रो सेटमा ७–७ को बराबरीको अवस्थाबाट १८–१५ ले पछि परेको थियो। नेपालविरुद्ध २१–१६ को अवस्थामा अघि रहेको उज्ज्वेकिस्तानले २३–१९ को अग्रता बनाएको थियो। तर प्रशिक्षकले अधिक सब्स्टिच्युसन गरेको कारण नेपालले एक अंक पाएको थियो।
त्यसपछि २३–२३ को पुनरागमन गरेको नेपालले २४–२६ ले नै हार बेहार्यो। तेस्रो सेटमा सुरुबाटै पछि परेको अवस्थाबाट नेपालले ८–५ को अग्रता बनाएको थियो। खेलमा १०–१० को बराबरी भएपछि नेपाल १६–१० ले अघि बढेको थियो। अग्रतालाई कायम राख्दै नेपालले २५–१५ को जित निकाल्दै खेलमा २–१ को अग्रता बनाएको हो।
त्यस्तै, तेस्रो सेटमा नेपालले १०–१० को बराबरीबाट अघि बढ्दै १७–१५ को अग्रता बनाएको थियो। तर १८–१८ को बराबरीपछि पुन अग्रता बनाएको नेपालले २२–२५ को हार बेहोर्यो। यससँगै खेल अन्तिम सेटमा पुग्यो।
अन्तिम सेटमा रक्षापंक्तिमा कमजोरी गरेको नेपालले सुरुमै ४–६ ले पछि परेको अवस्थालाई उल्टाउँदै ९–७ को अग्रता बनाएको थियो। सो अग्रतालाई कायम राख्दै नेपालले १५–११ यससँगै नेपालले लगातार दोस्रोपटक सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियन कपको उपाधि जितेको हो।
यससँगै नेपालले लगातार दोस्रोपटक सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियन कपको उपाधि जितेको हो। पुरुषतर्फको खेल भने आज दिउँसो सवा १ बजे नेपालले तेस्रो स्थानका लागि उज्ज्वेकिस्तानसँग खेल्नेछ।
प्रकाशित: December 28, 2021 | 14:24:35 काठमाडौं, मंगलबार, पुष १३, २०७८
तपाईं को प्रतिक्रिया
धनगढीको गेटालाई अलपत्र पारेर देउवाको गृहजिल्लामा नयाँ मेडिकल कलेज किन?
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट गेटामा कलेज निर्माण थालिएको थियो। मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराका अनुसार मेडिकल कलेजमा पूर्वाधार निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ।
स्थानीय सरकार हाँक्ने नारीशक्ति
अहिले चुनिएका महिला प्रमुख मध्ये कोही यसअघि पनि पालिका हाँकिसकेका छन्, कसैले उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने कोहीले अघिल्लो निर्वाचनमा पराजय भोगेका थिए।
कोअर्डिनेटरले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सेन्ट लरेन्स कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित
कलेजकै कोअर्डिनेटर जनार्दन अधिकारीले कक्षा ११ को छात्राहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका हुन्।
दमकको धक्काले झापामा हल्लिएन एमाले, माओवादी 'निल'
देशभर एमालेलाई बढार्न माओवादीलगायतका पाँच दलहरुलाई वैशाखी बनाएको कांग्रेसले कचनकवलमा भने राप्रपालाई पारस्त गर्न एमालेलाई वैशाखी बनायो। झापामा एमालेलाई परास्त गर्न राप्रपासँग पनि तालमेल भएको छ। यी तथ्यहरुलाई केलाएर हेर्दा दलका सिद्धान्त र विचारको सबैभन्दा ठूलो मजाक झापामा बन्‍यो।
काठमाडौंको १ लाख ३७ हजार मत गनियो, बालेनको फराकिलो अग्रता कायमै
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब १ लाख ९० हजार मत खसेकोमा आज साँझसम्ममा १ लाख ३७ हजार ४५२ मत गनेर सकिएको छ।
भरतपुरको मतगणना स्थगित
एमालेका ती प्रतिनिधिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको र एमालेले उनको रिहाइ नभएसम्म मतगणना स्थगित भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
भरतपुरमा अब १४ हजार मत गन्न बाँकी, कसको मत कति?
रेनुले ४५ हजार ८८७ मत प्राप्त गर्दा नेकपा (एमाले)का विजय सुवेदीले ३४ हजार ९९३ मत प्राप्त गरेका हुन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले १३ हजार ९३७ मत प्राप्त गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।
राप्रपा बन्ला राष्ट्रिय दल?
स्थानीय निर्वाचनको लोकप्रिय मतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपासँगै राप्रपा छ। राप्रपाले पाइरहेको मत हेर्दा अबको संघीय निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सम्भावना देखिन्छ।
भलिबलमा भविष्य खोजिरहेका धीरज, जसलाई खेलबाटै देशको शीर उँचो पार्नु छ
१६ वर्षकै उमेरदेखि भलिबल खेल्न सुरु गरेका धीरजले राष्ट्रिय टिमको जर्सीमा खेल्ने सपना भने साकार पार्न सकेका छैनन्। तर, जीवनको एक कालखण्डमा राष्ट्रिय टिमको जर्सी लगाएर खेल्ने उनको सपना मजबुत बन्दै गइरहेको छ।
काठमाडौं महानगरमा १ लाख २८ हजार मतगणना हुँदा कसले कति पाए?
पछिल्लो गणनाअनुसार प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उमेदवार बालेन्द्र साह (बालेन)को अग्रता थप फराकिलो बनेको छ। उनले ४३ हजार ८५० मत पाएका छन्।
भलिबल लिग समीक्षा : प्रभावहीन न्यु डायमन्ड, छुटेका प्रतीभा र सरस्वती
राष्ट्रिय महिला भलिबल क्लबको प्रमुख उपधि दावेदारको रुपमा न्यु डायमन्डले आफूलाई विगतदेखि प्रमाणित गर्दै आएको छ। अघिल्लो संस्करणको राष्ट्रिय महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि पनि न्यु डायमन्डले जितेको थियो।
भलिबल क्लब लिगको दुवै उपाधि आर्मीलाई, संगम र धन बहादुर सर्वोत्कृष्ट
छैटौं संस्करणको एनभीए महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लिगको दुवैतर्फको उपाधि विभागीय क्लब आर्मीले जितेको छ।
एनभीए लिग भलिबल : महिलामा एपीएफ र पुरुषतर्फ आर्मीको जित
छैटौं संस्करणको एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लिगमा शुक्रबार विभागीय टिम एपीएफले महिलातर्फ जित निकालेको छ।
एनभिए लिग : पुलिसको लगातार तेस्रो जित
प्रतिभा माली बेगरको न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई ३-० को सोझो सेटमा हराउँदै पुलिसले तेस्रो जित दर्ता गरेको हो। एकपक्षीय बनेको खेलमा पुलिसले डायमन्डलाई २५–११, २५–१७ र २५–१५ ले सहजै हराउन सफल भएको हो।
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
Copyright © 2022. Design & Development by Cn’C